Madaxweyne Mustafe Cagjar Oo Ka Hadlay Saami-qaybsiga Shidaalka Iyo Mudaharaaddadii Wardheer - Jigjiga Online
HomeSomalidaMadaxweyne Mustafe Cagjar Oo Ka Hadlay Saami-qaybsiga Shidaalka Iyo Mudaharaaddadii Wardheer
Jigjiga (Jigjigaonline) – Madaxweynaha Dawladda Deegaanka Soomaalida, Mustafe Muxumed Cumar ayaa ka hadlay go’aan kasoo baxay Golaha Federaalka Dawladda Itoobiya, kaas oo lagu shaaciyey saamiga shacabka DDS ay ka helayaan shidaalka laga soo saarayo deegaanka.
Golaha Federaalka JDFI ayaa shalay cod ku ansixiyey in Dawladda Deegaanka Soomaalidu ay 50% ku yeelato dakhliga kasoo xerooda shidaalka laga qodayo dhulka Soomaalida, kaas oo Shirkadda POLY-GCL ee laga leeyahay waddanka China ay ku guuleysatay inay soo saarto qaybtiisii hore, isla markaana dawladda Itoobiya ay heshiis kala gashay dalka Djibouti in laga dhoofiyo.
Madaxweyne Mustafe Muxumed Cumar iyo ku-xigeenkiisa Aadan Faarax ayaa magaalada Addis Ababa u tegay arrintan, waxaana ay kasoo hooyeen guushii ugu weynayd ee shacabka DDS ka gaadhaan khayraadkooda.
Madaxweynaha oo waraysi siiyey idaacadda BBC maanta, ayaa waxa uu sheegay in guddida joogtada ee qaybsiga dakhliga Itoobiya uu u saaray khubaro soo daraasaysa arrintan, ugu dambayna laysku afgartay in gaashka iyo saliidda laga helayo gobolka Soomaalida iyo guud ahaan dalkaba in gobolka soo saara boqolkiiba konton uu leeyahay.
Madaxweyna Cagjar waxa kale oo uu ka hadlay mudaharaadyo maalmihii ugu dambeeyey ka dhacayay magaalada Wardheer.
“Muddo shan illaa lix bilood ah ayaa shirar badan laga galay, waxaana hoggaaminayey guddida joogtada ah ee qaybsiga dakhliga oo u saaray niman khubaro ah oo soo daraaseeya, markii dambena gobollada siyaasadeed ayaa laysku afgartay in dakhliga laga helayo gaaska iyo batrooliyamka guud ee dalka in gobolka soo saaray uu 50% (boqolkiiba konton) leeyahay, dawladda dhexe 25%, boqolkiiba 25% na gobollada aan soo saarin loo qaybinayo.” Sidaas ayuu yidhi madaxweyne Mustafe Cagjar oo u warramay BBC Somali.
Madaxweynuhu waxa uu sharraxaad ka bixiyey qaabka loo qaybsanayo dakhliga kasoo xerooda khayraadka dalka, iyo sida ay Soomaalidu ku helayso saamigeeda, waxaanu yidhi: “Qawaaniinta Adduunka, shirkadda shidaalka qodaysa iyo dawladdu marka ay heshiiyaan, waxa lagu xisaabtamaa in kharashka shirkadda ka baxay ay dawladdu ku celiso, faa’iidona way ku leedahay, laakiin waxa la xisaabiyaa waxa cashuurta la saarayo faa’iidada ay shirkaddu hesho. Cashuurtaas ayuu waddanku qaataa qaybtiisa. Markaa cashuurta Itoobiya kusoo hagaagaysa faa’iidada kasoo xeroonaysa ayaa la qaybsanayaa. Faa’iidadaas ayaa lagu heshiiyey in boqolkiiba konton aanu u kala qaadano.”
Madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in sharciga qaybinta khayraadka ee shalay Golaha Fulintu ansixiyeen inuu yahay mid dalka oo dhan khuseeya, waxaana uu yidhi: “Dhamaan deegaamada oo dhan ayay khusaysaa. Waxay khusaysaa wax walba oo khayraad ah oo loo yaqaano High Minerals iyo Oil and Gas.”
Wariyaha BBC-da ee waraysiga qaaday ayaa waxa uu madaxweynaha u sheegay in Dawladda Federaalka oo uu la xidhiidhay ay ka gaabsatay, laakiin madaxweyne Cagjar ayaa ku jawaabay in arrintani aanay ahayn mid ay Dawladda Deegaanka oo kali ahi iska sheeganayso, laakiin labada hay’adood ee guddida fulinta iyo golaha anixiyeyba ay yihiin kuwo federaal ah oo dalka oo dhan u sameeya shuruucda.
Waxa kale oo uu madaxweynuhu caddeeyey in baarlamaanada federaalka iyo deegaankaba la siin doono qoraallada guddida qaybsiga khayraadka iyo Golaha Federation-ka ee ansixiyey.
Madaxweynaha Dawladda Deegaanka Oo XOOGAG Dano Gaar Ah Leh Ku Eedeeyey Mudaharaadyadii Ka Dhacay WARDHEER